प्रशंगवस : सवारी भाडा समायोजन, दशैँ तिहारको उपहार बनोस ! – ebaglung.com
प्रशंगवस : सवारी भाडा समायोजन, दशैँ तिहारको उपहार बनोस !
२०७६ भाद्र २७, शुक्रबार ०८:१५	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
बुर्तिवाङ २०७६ भदौ २७ । केहि वर्ष अघीसम्म दुर्गममा नाम दर्ता भएको निसीभूजी क्षेत्र (बुर्तिवाङ) अहिले मध्यपहाडी लोकमार्गले छिचोलेपछी सुगम स्थल बन्न पुगेको छ । थरीथरीका सवारी साधनहरुको आवागमन भैरहने निसीभूजी क्षेत्रको केन्द्र बुर्तिवाङ बजारमा पछिल्लो समय हेलिकप्टर उडान पनि निकै बढेको छ । बुर्तिवाङ बजार देखी दिनहुँ बागलुङ, पोखरा, काठमाडौ र गुल्मी, पाल्पा, बुटवल, भैरहवा सम्म र त्यसदेखी अन्य ठाउँहरुका लागी पनि सवारी साधनहरु छुट्ने भित्रिने गर्छन । ढोरपाटन नगरपालिकाका वडावडा, निसीखोला र तमानखोला गाउपालिका सम्म सवारी साधनहरु ओहोर दोहोर गर्छन् । यातातायको सुविधा निसीभूजीबासीलाई मिलेको छ । बाढी पहिरोले दु:ख नदिए सम्म निसीभूजीका जनतालाई यातातायको सुविधा त छ तर बस मालिक, यातायात व्यवसायी समितिहरुको एकाधिकारबादले गर्दा स्थानीयलाई थेग्नै नसक्ने पीडाबोध भैरहेको छ । बिहुँको घोँडा बाँधे देखी बुर्तिवाङ मध्यपहाडी लोकमार्ग पीच भएको वर्षौ बित्दा सम्म निसीभूजीका जनता कच्ची सडकको महंगो भाडा तिर्न बाध्य छन् ।
निसीभूजीका सोझा जनताको मत लिएर जनप्रतिनिधी पदमा आसीन हुन पुगेकाहरु बेला बखत यसो मुख देखाउन झुल्किएपनि यस क्षेत्रका जनतासंग जथाभावी असुल्दै आएको महंगो सवारी भाडाले सेकिएको ढाडमा मल्हम लगाउने कोहि नभएको महसूस गरिहेका छन्, जन प्रतिनिधीहरु चिल्ला गाडीमा गुडेको र हेलिकप्टरमा उडेको टुलुटुलु हेरिहेछन निसीभूजीबासी । गाउँका झिना मसिना योजनाहरुको निरीक्षण अवलोकन हेलिकप्टरबाट गर्ने बानी परिसकेर हो कि स्थलमार्गमा चल्ने गाडीगुडीले भाडामा गरेको ब्रह्मलुट नदेखेको ? निसीभूजीका जनताहरुको प्रश्न हो यो ।
महिलाहरुको महान पर्व तीज गयो (सकियो), नेता नेतिनीहरु आए नाँचे, दर खाए उधुमै मच्चाएर फर्किए । अब ठुला चाडपर्व दशैँ तिहार आउदैछन् । नेपालीहरुको जीवनमा विशेष महत्व राख्ने दशैँ तिहारका लागी गैरकानूनी रुपमा असुली आएको सवारी भाडा सरोकारवाला निकायले समायोजन गरिदिए बास्तवमा निसीभूजीका जनतालाई दशैँतिहारको उपहार हुन्थ्यो र कानूनको मर्यादा रहन्थ्यो । सिँहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा झरेपछी, नेकपाको दुई तिहाईको सरकार बनेपछीपनि जनता यसरी शोषित हुनुलाई के भनौँ र खोई ? गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भो ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले विक्री गर्ने नून चीनीलाई सुपथ मुल्यको पसल नाम दिएर सदरमुकाममा सन्चालन गरिने नून चीनीको पसलले समुचा जिल्लाबासीलाई राहत मिल्ला र ? बरु दशैँ तिहारको मुखमा सवारी भाडामा भएको ब्रह्मलुटलाई नियन्त्रण गर्न भाडा समायोजन गरिदिए आम जनतालाई राहत मिल्ने छ । दशैँ तिहारको उपहार बन्नेछ !
सवारी भाडा समायोजनलाई लिएर धेरै चर्चा उपचर्चा चली रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय एकदुई दिन भित्रै सवारी भाडा समायोजन गर्ने तरखरमा लागेको बुझिएको छ । जनतासंग जनप्रतिनिधी पुगिरहेका छन्, जागरण अभियान सन्चालनमा छ । आम जनतासंग सरोकार राख्ने सवारी भाडा समायोजनबारेमा छलफल होस, सबैको ध्यान जाओस ।
खर्वाङमा काग्रेसको जागरण अभियान सम्पन्न : उपचुनावकमा लाग्न आग्रह !
सरकारले नेपालीलाई सम्वृद्धिको सपना देखाएर कंगाल वनाउन लाग्यो : केन्द्रीय प्रतिनिधि गुरुङ